Wararka Maanta: Talaado, July 31, 2012-Dhagaysiga dacwad ka dhan ah Guddiga Diiwaan-gelinta Somaliland oo ka furantay Magaalada Hargeysa
Afartan urur siyaasadeed ayaa ka mid ahaa 15 urur siyaasadeed oo doonayey inay ka qaybgalaan doorashooyinka golaha deegaanka Somaliland oo la filayo inay dhowaan ka dhacaan dalka, balse guddidda DIiwaangelinta ururadda oo qiimeyn iyo kala reebis ku samaynayey ururadda ayaa sheegay in sagaal urur oo afartan urur ka mid yihiin ku hadheen qiimeyntaasi lagu samaynayey ururadda siyaasadda, isla markaana aanay ka qaybgali Karin doorashooyinka soo socda, halka lix urur ku soo baxeen qiimeyntaasi.
Haseyeeshee, afartan urur ayaa ku qanci waayey qiimeynta la sheegay waxayna dacwad ka dhan ah guddidaasi ka furteen maxkamadda sare, iyagoo sheegay inay marayaan wadadii sharcigu u jideeyey in cidii qanci waydaa marto oo ah garsoorka dalka.
Dhagaysigan Dcwada ka dhanka ah guddidda waxay maanta ku bilaabnantay ururka UDHIS doodiisa iyo cadaalad darada uu tirsanayo iyo wailba qodobadda sharciga ah uu sheegay in la jabiyey, halka ay guddiduna uu u joogay looyar ka difaacayey eedaha loo soo jeediyey.
Dhagaysan ayaa todobnaadkan socon doono oo urur waliba waxa uu ku eedeynayo guddidan soo bandhigay, waxaana ugu dambayn go’aan soo saari doono maxkamadda sare ee Somaliland.
Afartan urur ee gal dacwadeedka ka furtay maxkamadda ayaa kala ah Ururka UDHIS, NDB, jamhuuriga, iyo Horyaal, kuwaas oo si degan u dhagaysanayey dacwadda, waxaanay sheegeen inay marayaan jidkii sharcigu u jideeyey, wallow qaarkood ka caga jiidayeen inay maxkamaddu soo saari doonto go’aan raali galiya, rajjoo badana aanay ka filayn, balse qaarkood sheegay inay ku qanci doonaan haddii aan maxkamadda la faro galin.
Maxkamadda sare ayaa dacwado siyaasadeed oo ay xisbiyo isku haysteen hore u kala garqaaday, waxaanay qolo waliba ku dhaqantay go’aankii ka soo baxay maxkamadda.